San Htun's Diary: အလွဲများ (၃)
စတိတ်ရဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာသာ ဘတ်စ်ကား၊ မီးရထားရှိပြီး တနေရာနဲ့တနေရာ ဝေးတော့ ကားမှ မမောင်းတတ်ရင် လမ်းလျှောက်လို့ လဲမရ။ ကျောင်းမပြီးခင် လိုင်စင်ရအောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်မောင်းလိုင်စင် အရင်ဖြေရပါတယ်။ အိုင်အိုဝါမှာတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရပြီး အင်ဒီးယာနား ဖို့ ဝိန်းမှာတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြေရပါတယ်။ အိုင်အိုဝါမှာ သင်မောင်းလိုင်စင်ရပြီးတာနဲ့လိုင်စင်ဖြေလို့ ရပေမဲ့ အင်ဒီးယာနားမှာတော့ ၆လကြာမှာ လိုင်စင်ဖြေလို့ရပါတယ်။ ပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ စတိတ်မှာ ကားမောင်းလိုင်စင်ကလည်း အရေးကြီးတာမို့စန်းထွန်းတယောက် ခြေထောက်ကို ဘီးတတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
လိုင်စင်ရပြီး ကျောင်းကနေ မကြာခင် ထွက်ခွာကြတော့မဲ့ ဆူနမ်တို့ ဆီကနေ အတင်းလည်ပင်းညှစ် ဈေးလျော့ခိုင်းပြီး ဟွန်းကလွဲရင် ကျန်တာအကုန်မြည်တဲ့ ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက်ကားလေးတစီး ဝယ်ထားရပါတယ်။ ဆူနမ်တို့ ကတော့ "ကားက အပြင်ပန်းသာ မကောင်းတာ စက်က အတော်ကောင်းတယ်" ဆိုပြီး ဈေးသည်အိုက်တင်နဲ့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလလယ်လောက်ဆိုရင် နှင်းထုက ၈လက်မလောက်ရှိမှာမို့ကားမောင်းကျင့်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့လည်း " နိုဝင်ဘာလလယ် နှင်းမကျမှီ လိုင်စင်ရရေး ဒို့ အရေး..." လို့ကြွေးကြော်ရင်း နေ့ တိုင်း အားရင်အားသလို ကားမောင်းသင်နေရပါတယ်။ ဆရာကတော့ ဆူနမ်ပေါ့။
ကားကို ကျွှမ်းကျင်စွာ မောင်းတတ်ဖို့ လိုသလို လမ်းမှာရှိတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ညွှန်တဲ့အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကားမောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ပြည်နယ်ဥပဒေနဲ့လမ်းအညွှန်းဆိုင်းဘုတ်တွေ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်က သတိပေးဆိုင်ဘုတ်၊ အဝါရောင်က ရှေ့ ကလမ်းအခြေအနေကို သတင်းပေးတာ၊ အပြာရောင်က ရှေ့ မှာ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊အစားအစာရှိတယ်ဆိုတာ သတိပေးတာ၊ အစိမ်းရောင်ကတော့ ဘယ်မြို့ မိုင်ဘယ်လောက်။
ပုံ ၉ - လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ STOP ဆိုင်းတွေ့ ရင် ကားကို လုံးဝရပ်။ အရင်ရောက်တဲ့သူ အရင်ထွက်။
ပုံ ၂ - ကတော့ ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီး။
ပုံ ၄ -SPEED LIMIT 50 တွေ့ ရင် ၄၅နဲ့၅၀ ကြား မောင်းရပါတယ်။ ၅၀ထက် ကျော်လို့ မရ။
ပုံ ၁၁ -YIELD ဆိုင်းတွေ့ ရင် အရှိန်လျော့ပြီး ရပ်ဖို့ အသင့်ပြင်။
ပုံ ၃၈ - SCHOOL ZONE ဆိုင်းတွေ့ ရင် အရှိန်လျော့ပြီး သတိထား ရပ်ဖို့ရယ်ဒီပြင်။
ပုံ ၂၃၊ ၄၁ - လိမ်း(LANE)ချိန်းချင်ရင် အလယ်လိမ်းကို အသုံးပြု။
လိမ်းချိန်းတော့မယ်ဆိုမယ်ဆိုရင် မှန်တွေကနေ နောက်ကားကို ကြည့်။ တခါတလေ နောက်ကားက အရမ်းကပ်နေရင် မှန်မှာ မမြင်ရဘူး BLIND SPOT လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ကို လှည့်ကြည့်ဖို့ လည်း လိုပါတယ်။
ပုံ ၁၈ - မိန်းလမ်းမကြီးပေါ် တက်လာမဲ့ ကားတွေရှိတော့ သတိပြု။ ကွေ့ တိုင်း SIGNALပြဖို့လိုပါတယ်။
NO PASSING ZONE ဆိုင်းတွေ့ ရင် ကွေ့ လို့မရတော့ပါဘူး။ ပုံ ၄၆ - အဝါရောင်တုံးလေးတွေဆိုရင် ကွေ့ လို့ ရပြီး အဝါရောင်လိုင်းဆိုရင် ကွေ့ လို့မရပါ။
SCHOOL BUS က STOP ဆိုင်းပြထားရင် မီတာ ၁၀၀ လောက်ကနေ ရပ်ရပါမယ်။ SCHOOL BUS ကို ကျော်တက်လို့မရပါဘူး။ လူနာတင်ယာဉ်၊ရဲကားတွေ ဥသြဆွဲပြီး လာရင် ညာကပ် လမ်းရှင်းပေးပြီး ရပ်ပေးရပါတယ်။
လိုင်စင်ရအောင် ကြိုးစားကြတဲ့အခါ တခေါက်တည်းနဲ့ရသွားတဲ့သူက အရမ်းရှားပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၃၊၄ ခေါက်တော့ ဖြေကြရပါတယ်။ ဒီလို ကြိုးစားကြရင်း ကြုံရတဲ့ အလွဲလေးတွေကတော့...
တရုတ်ပြည် Wuhan ပြည်နယ်မှာ ကားမောင်းခဲ့တဲ့ Zhong qi တယောက် လိုင်စင် သွားဖြေတော့ ၂ လ ဖြေဆိုခွင့် ဘမ်းလိုက်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ၂ ပတ်၊ ၃ ပတ် ပဲ ဘမ်း(၃ပတ်ကြာမှာ လာဖြေဆိုခွင့် ပြုခြင်း)တာ သူ့ ကျမှ ဘာလို့၂ လ ဘမ်းတာပါလိမ့်လို့ ။ သူများလမ်းကြောင်းဆီကို မှားဝင်သွားလို့ တဲ့။ ဘမ်းလည်း ဘမ်းချင်စရာပါပဲ။ critical error မကပဲ fatal error ဖြစ်နေလို့ ပါ။
အကွေ့ မှာ စစ်ကနယ်(signal)ပြဖို့မေ့သွားတဲ့ ဆူနမ်ကတော့ ၃ကြိမ်မြောက်နဲ့လိုင်စင်ရခွင့်ကို လက်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။
မိန်း(main)လမ်းမကြီးပေါ်ကနေ ရှေ့ မှာ STOP ဆိုင်းလည်း မရှိဘဲ လမ်းသွယ်လေးတွေမှာ STOP ဆိုင်းရှိလို့ရပ်နေတဲ့ ကားတွေကို လက်ကလေးပြကာ အရင်သွားလို့ဦးစားပေးလိုက်တဲ့ Yong Cheng ခမျာ ၃ ပတ် ဘမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ လမ်းသွယ်က STOP ဆိုင်းမှာ ရပ်ပြီး မိန်းလမ်းက ကားရှင်းအောင် စောင့်နေတဲ့ ကားတွေခမျာ မိန်းလမ်းက ကားက ရုတ်တရတ် လက်လေးပြကာ ဦးစားပေးတော့ ဘယ်နဲ့ ဟာပါလိမ့်ဆိုပြီး အူကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်လို့ ။ Yong ကို တွေ့ တိုင်း "You are so kind."လို့စကြတော့တာပါပဲ။
မလေးရှားလေး ဂျွှန်နဲ့ရုရှား Ilya၊ Sakei ၊ Vlatima တို့အဖြစ်ကတော့ ဒီလို..။ ဂျွှန့် မှာ သင်မောင်းလိုင်စင်ရှိပြီး အီလီယာမှာတော့ ရုရှကားမောင်းလိုင်စင် ရှိပါတယ်။ လိုင်စင်ဖြေပြီးပြန်လာရင် ဂျွှန်က လိုင်စင်ရ၊ အီလီယာက သင်မောင်းလိုင်စင်ရလို့လိုင်စင်ရသူ ဂျွှန်က ကားကို မိန့် မိန့် ကြီး မောင်းလို့ .... သူတို့ အတွေးက ဒီလို။ အလာတုန်းက လိုင်စင်ရှိသူကတယောက်က မောင်းလာပြီး ဂျွှန်က သူလိုင်စင်ရမှာလို့တထစ်ချ ယုံကြည်ပြီး ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ လိုင်စင်ဖြေပြီးချိန်မှာတော့ ဂျွှန်က လိုင်စင်မရ၊ အီလီယာကလည်း သင်မောင်းလိုင်စင်မရတော့ ပြန်ဖို့အခက်ကြုံပါတယ်။ ရာမားလိုင်စင်ဖြေတာကို လိုက်ပို့ ပေးတဲ့ ဆူနမ်ခမျာ ကံထူးသွားပါတယ်။
ဂျွှန်က သူလိုင်စင်မအောင်တာကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လို့ ။ လိုင်စင်ရမှာလို့တထစ်ချ ယုံကြည်ထားတာ။ မလေးရှားမှာ ကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် မောင်းနိုင်ပေမဲ့ မလေးရှားက စင်္ကာပူလို ဘယ်မောင်း။ STOP ဆိုင်းကျော်မှ ကားကို ရပ်လို့ ဆိုင်းဘုတ်မတိုင်ခင် ရပ်ရကြောင်း၊ SPEED LIMIT 45 ဆိုင်းတွေ့ တာ ၂၅ မိုင်နှုန်းနဲ့မောင်းနေလို့ ၄၀ ကနေ ၄၅ ကြား မောင်းရကြောင်း ဆူနမ်က သင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဥပဒေကို နားမလည်ဘဲ ဘယ်လိုများ ကားမောင်းလိုင်စင် လာဖြေပါလိမ့်၊ လိုင်စင် တခါတည်းနဲ့ရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ တထစ်ချ ယုံကြည်နေပါလိမ့်လို့ဆူနမ်ခမျာ အံ့တွေ သြလို့ ။ ကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် မောင်းနိုင်ပေမဲ့ ဥပဒေကို နားမလည်လို့ကျတာလို့တို့ တွေ သဘောပေါက်ပေမဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ ဂျွှန့် ကို မြင်ရတော့ over confident လို့မှတ်ချက်ပြုကြတယ်။
STOP ဆိုင်းတွေ့ ပေမဲ့ GO လို့ပြောတဲ့ လိုင်စင်စစ်တဲ့ အန်တီကြီးရဲ့စကားကို နားယောင်မိတဲ့ မိုင်းခမျာ ကျတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် STOP ဆိုင်းတွေ့ လို့မိုင်းကို စချင်တိုင်း လက်ကလေးကို ရှေ့ ထုတ်ကာပြပြီး "STOP means full stop." လို့စလေ့ရှိပါတယ်။
မီးပွိုင့်မှာ မီးစိမ်းပေမဲ့ မီးနီနေလို့ရပ်နေတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို လက်ကလေးပြကာ ဦးစားပေးရှာတဲ့ Rajehကို လိုင်စင်စစ်သူ အန်တီကြီးက မီးစိမ်းလေးကို ညွှန်ပြရင်း "Green means go." လို့သတိပေးကာ ၃ပတ် ဘမ်းလိုက်ပါတယ်။ Rajehကို တွေ့ တိုင်း "Green means go. Red means stop." လို့ဟားလေ့ရှိပါတယ်။ မခံချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့လားမသိ နောက်တကြိမ်မှာ လိုင်စင်ရပါတယ်။ လိုင်စင်ရသွားပြန်တော့လည်း Rajeh တယောက် "Green means go. Red means stop." ဆိုတာ တကယ်သဘောပေါက်သွားပြီနဲ့ တူတယ်လို့ဟားကြပြန်တယ်။ Rajeh လိုင်စင်ရတော့ တို့ တွေမှာ ဝမ်းနည်းပက်လက်တွေ ဖြစ်လို့စရမဲ့သူ မရှိတော့လို့ လေ။
လိုင်စင်ရပြီးသားသူတွေနဲ့လိုင်စင်မဖြေရသေးတဲ့သူတွေက ဟားနိုင်ပေမဲ့ လိုင်စင်ဖြေနေဆဲသူတွေကတော့ မချိသွားဖြဲ။ နောက်ဆို စန်းထွန်းလည်း မချိသွားဖြဲ ရတော့မှာ...:D ။ ကိုင်း...ကြိတ်လိုက်စမ်း...စန်းထွန်းရေ.... အလှည့်ကျရင် မနွဲ့ မတမ်း....:P ။
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁။
စည်းကမ်းတကျ မောင်းတတ်ဖို့က အရေးကြီးသေးတာကိုးနော်။
တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေ မတူတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ သူများဆီရောက်တော့ လိုင်စင်တောင်မရ။
စန်းထွန်းလေးအလှည့်မှာ မချိပြုံးနဲ့ ပြန်မလာရဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေး ပြန်လာရပါစေနော်။ လိုင်စင်လည်း အမြန်ဆုံးရပါစေလို့။
အဲလို ကားက ဘယ်လောက်ပေးရတုန်း ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိချင်တာပါ။
အနည်းဆုံး ၈၀၀ ကနေ သောင်းကျော်တန်အထိ ရှိတယ်...
မောင်းတော့ မမောင်းတတ်ပေမယ့် ၈၀၀တန်ကားတော့ ၀ယ်စမ်းကြည့်ချင်တယ်... မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင် ရီစရာကြီးနော်.. ၈၀၀တန်ကားတဲ့ :D
ဒီမှာဘ်ာလောက် ကားမောင်းတတ်တတ် ဟိုရောက်ရင် ပြန်ဖြေရတယ်လို့ သိထားဘူးတယ်။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ စံနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပုံတွေ၊ ယာဉ်မောင်းသူအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့၊ ယာဉ်မောင်းသူကိုယ်တိုင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်ပြတွေကို ကျွမ်းကျင်သိနားလည်စေဖို့ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကို သဘောကျမိတယ်။
အဲဒီကစစ်သလိုသာ ကျကျနနစစ်ပြီးမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရင် ဒီကမောင်တွေ တစ်ယောက်မှတောင် အောင်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး...မနေ့ကပဲ ရှေ့ကမောင်မင်းကြီးသားတစ်ယောက်က ဆစ်ဂနယ် ဘယ်ပြပြီး ညာဘက်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ကွေ့ချသွားတာ ဘောလုံးသမားများ ဘယ်ဘက်ကိုအယောင်ပြပြီး ညာဘက်ကို ဆွဲသွားတာနဲ့တောင် တူသေးတော့...သူမှားလို့ ကိုယ်က ၀င်တိုက်မိပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ကို မိုးမွှန်နေအောင်ဆဲပြန်ဦးမှာ သေချာနေတာကြောင့် ကိုယ့်ဒေါသလေးကို ပြန်မြိုချလိုက်ရရှာတယ်...အဲဒီမှာ ကားမောင်းရင်တော့ ကားသေးသေးလေးပဲမောင်းပေါ့လေ...ရွှေပြည်ကို ပြန်လာရင်တော့ ဘီးတစ်လုံးတစ်လုံးကို လူတစ်ရပ်မြင့်တဲ့ စတန့်ကားကြီးတွေသာမောင်းပေတော့...အဲဒါမှ အန္တရာယ်ကင်းမယ်...စိတ်မထင်လို့ ၀င်ကြိတ်လိုက်ရရင်လဲ ကိုယ်မနာတော့ဘူးပေါ့း)
ဦးဟန်ကြည်ကြီး နောက်တခါဆို ကစ်ခ်(kick)ထည့်လိုက်... :)
စန်းထွန်းရေ ကားမောင်းအတွေ့အကြုံလေး လာဖတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဆူနမ်က ဘာလူမျိုးလည်းဟင်။
Sunam Gurung နဲ့Rama Khanal က နီပေါ၊ Mai Pham က ဗီယက်နမ်လူမျိုးပါ ဘုရား။ တပည့်တော်မတို့အတန်းမှာ တကမ္ဘာလုံးက ကျောင်းသားတွေ လာဆုံကြတယ် ဘုရား။ တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊နီပေါ၊တရုတ်၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မွန်ဂိုလီးယား၊ဂျော်ဒန်၊အီဂျစ်၊အီရန်၊ပါလက်စတိုင်း၊ဘာရိန်း၊ယီမင်၊ရုရှ၊အီသီယိုးပီးယား၊တန်ဇနီးယား၊အီတရီယာ၊ကွန်ဂို၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ကိုလံဘီယာ။
ကိုရင်လည်း မချိသွားဖြဲပဲဗျ ကပ္ပိယကြီး စံထွန်းရဲ့ ဟီးဟီး..
မမချောပေးတဲ့ဆု အမြန်ဆုံး ပြည့်စေဗျား...း)
MGTHANT လိုင်စင်ရပြီးလျှင် ကားကို ဒီကောင့်နှင့် ပြန်ရောင်းပါမည်...(ကြုံတုန်း ကြေငြာထားမှ)
မြသွေး လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ ခင်ည...
ကိုညိမ်း မှန်သဗျို့ ...
ဦးဟန်ကြည်ကြီး နောက်တခါဆို ကစ်ထည့်လိုက်..
ဘုန်းဘုန်းတောက် လာလည်တာ ကျေးဇူး ဘုရာ့...
ကိုရင်နဲ့ ကပ္ပိယက ဘဝတူနေပါလားဗျို့ ....